Al Mutawaatir | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Xadiis kasta oo aan maanta maqalno oo ama Nabiga sallalaahu caleyhi wasalam, ama saxaabi ama taabici loo tiiriyo oo la yidhaahdo iyagaa sidaa yidhi, waxuu nagu soo gaadhaa laba wado. Labadaas waddo ayaa waxaa la kala yidhaahdaa (Al Mutawaatir iyo Al-aaxaad). Waxaan marka hore inoo sheegi waxa laga wado Mutawaatir inshaAllaah.
Luuqad ahaan: Waxaa laga wadaa wax is daba raacraac. Tusaale waxaa la odhan ”Tawaataral madharu” oo ah Roobku wuu is raacraacay.
Isdhilaax ahaan: Waa xadiiska ay werinayaan dad fara badaan oo aan tiro lagu koobi karin.Dadkaas oo aysan suurta gal ahaanayn inay hadal been ah isku wada raacaan.
Waxaana laga wadaa waxaa weeye , hadalkan la werinayo haddii uu yahay mid laga werinayo Nabiga scw oo ay hadalkaasi soo werinayaan saxaaba badan, saxabaas badana waxaa kasii werinaya Taabiciyiin badan, Taabiciyiintas badana kuwa kaloo badan baa kasii werin iwm. Waxaa la odhanayaa Xadiiskan waa ”Mutawaatir.”
Culimadu waxay u sameeyeen wax la yidhaahdo shuruud. Si aan loo odhan xadiis welba waa mutawaatir. Iyo sidii lagu kala garan lahaa xadiiska mutaawtirka iyo kaan ahayn.
Dad badan inay werinayaan: Xadiiska mutawaatirka ah shuruudiisa ugu horeysa waa inay dadka xadiiskan werinaya yihiin dad aad u fara badan. Waana la isku khilaafay tirada ugu yare e ay ahaan karaan. Waxaa la yidhi 70 qof kama hooseyn karaan, qaarna waxay dhaheen 40. Laakiin siduu yidhi Al Asdhakhriy waa 10 qof ugu yaraan. Hadalkaas ayaana ah midkan ugu raajixsan. Dabaqad kasta inay dadka badan yihin: Waa in ay dabaqad kasta ay werinayaan dad fara badan. Inaysan ahayn macquul ama caqli gal waxaasoo dad ahi inay been isu wada raaceen.
Inay dhamaantood isticmaalayaan wax dareen ah. Sida waan maqlay, waxaa ii sheegay, waxaan arkay, waxaan taabtay iwm. Xukinkiisa
Xadiiska mutawaatirka ahi waxuu inoo faaiideyaa inuu hadalkani yahay mid yaqiin ah oo ay la micno tahay sida adigoo waxan arkay. Waxayna faiideysaa cilmiga la yidhaahdo “Dharuuri.” Maadama waxaasoo dad ahi ay isku wada raaceen hadalkaas, uma baahnid inaad soo wada baadho dadkan xadiiska werinaya xaaladahooda oo aad dhahdo hebel baa kujira oo kan ah iwm. Saas daraadeed xadiiska Mutawaatirka ahi waa Maqbuul .
Noocyada uu U qeybsamo
Xadiiska Mutawatirka ahi laba nooc ayuu u qeybsamaa.
Al Mutawaatir al Lafdiy : Waxaa laga wadaa xadiiska “erayadiisa” ama Lafdigiisa uu ahaaday mid ay dad badan werinayaan. Tusaale: Nabiga scw waxuu yidhi (Qofkii iga been abuurta si ula kas ah haka diyaarsado Naarta boos). Xadiiskan waxaa werinaya ayaa la yidhaahdaa dhawr iyo todobaatan saxaabo. Kulligoodna waxay xadiiska ku werinayaan erayadan (man kadaba calayya).
Al Mutawaatir macnawiy: Waa xadiiska ay weriyaan dad fara badan micnahiisa, balse kuligood waxay isticmaalayaan erayo kala duwan, micnahu laakiin waa isku mid. Tusaale: Inuu Nabigu sallalaahu caleyhi wasallam uu gacmaha kor u qaaday markuu ducaysanayay. Waxaa kusoo aroortay 100 xadiis oo uu mid welba sheegayo Inuu Nabigu sallahu calayhi wasallam gacmaha kor uqaaday balse way kala duwantaahy sheekada ama qaddiyada markaas uu Nabigu duceysanayay. Masalaad dhexdeed bay aahyd mise maya iwm. Balse kuligood micnaha ah “inuu gacma kor u taagay” way isu wada raaceen.
Tusaale axadiista mutawaatirka
Xadiisyo badan baa jira oo ah Mutawaatir sida:-
Nabiga (Sallalaahu Calayhi wasallam) Waxuu yidhi “Qofkii Ilaahay dartii u dhisa misaajid, isna Ilaahay baa janadda guri oga dhisa” ama xadiiska kale ee ahaa “Wax welboo lagu sakhraamo waa xaaraam” Iwm.
Laakiinse waa laga badanyahay axadiista mutawaatirka hadaan u eegno kuwa aan ahayn mutawaatirka (al aaxaadka ah).
Kutubta ugu caansan ee laga qoray
الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة : للسيوطي
قطف الأزهار ( isla suyuudi baa leh)
نظم المتناثر من الحديث المتواتر : لمحمد بن جعفر الكتاني
from → Al Mutawaatir, Duruus Yaryar Cilmul Xadiith
← Ibnu Kathiir
Imaam Bukhaari →